The Bats of Austin, Texas | Vaovao momba ny dia
Ny renivohitry ny fanjakan'i Texas dia Austin. Tsy izany velively no tanàna be mponina indrindra, satria i Houston no mamely azy hatreto, ary tsy izy koa no mpizahatany be mpitsidika indrindra. Na dia izany aza, dia tanàna tena tsara tarehy misy toerana mahaliana maro, toy ny valan-javaboary sy tranobe lehibe toa ny Lapan'ny tanàna, ny fipetrahan'ny governemantam-panjakana na ny Tower Condominius, trano fonenana mahatratra 172 metatra ny haavony, na dia mbola misy trano avo kokoa ao an-tanàna aza, The Austonian.
Nefa inona no mampalaza an'i Austin, mbola betsaka noho ny vaovao aza Boriborintany haingam-pandeha izay hanatontosana Grand Prix 1 Formula XNUMX tsy ho ela dia izy ireo ny ramanavy.
Raha tena nisy i Batman dia mety ho trano fonenany i Austin, ary ny zava-misy dia vondron'olona marobe amin'ireo biby ireo no monina ao an-tanànan'i Texas, maro be ka tsy tafiditra ao anaty kaonty an'arivony akory aza izy ireo, nefa tapitrisa mahery mihitsy aza. Miresaka momba izany isika ny vondrom-piarahamonina an-drenivohitra lehibe indrindra eto an-tany amin'ireo biby mampinono ireo.
Ity vondrom-piarahamonina ity dia mivory indrindra ao amin'ny lakaly iray amin'ireo tetezana ao an-tanàna, ny Bridge Bridge, mandritra ny volana mafana kokoa, eo anelanelan'ny volana martsa sy novambra. Mandritra izany fotoana izany, isaky ny hariva dia mivoaka isan'andro ny ramanavy mitady sakafo hariva. Voalaza koa fa mihinana bibikely mihoatra ny iray taonina isan-kariva izy ireo.
Eny, lasa ireo ramanavy mivoaka avy ao amin'ny Bridge Bridge seho lehibe indrindra ary amin'ny hetsika fizahan-tany lehibe indrindra ao an-tanànan'i Austin. Araka izany, isaky ny tolakandro dia mpizahatany sy olona liana maro no manatona ny tetezana sy ny manodidina azy, feno fitaovana fakan-tsary sy sary, hijerena ilay sary mahatalanjona ramanavy an'arivony manidina ary ny feony sy ny elatra an'arivony mihetsiketsika an'arivony miapotra. Fijery voajanahary tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Ireo ramanavy any Austin, Texas
Inona no ho hita sy hatao any Guangzhou